China Tungsten Drop Shot Weight Weight uye Fekitori | Kelu
Mutengo weuniti (EXW): US $ 0.1 ~ $ 2.0 maererano nehuremu uye huwandu
KELU Tungsten Tea Kuderedza Shot Masimbi inogadzirwa kubva kuAuthentic Eco Pro Tungsten.
Izvo zvakajairika Tungsten Alloy pakakwirira density 17.5 ~ 18 g / cm3.
Kune akatiwandei akatiwandei uye mavara kuti tungsten Kudonha Shot hove, kusanganisira kupenya hove iyo yekuvhenekesa hove usiku.
KELU, inyanzvi MIM fekitori ine makore anopfuura gumi ruzivo paMIM tekinoroji iyo yakaiswa yakawandisa kumitambo yakawanda, hove zvishandiso, zvekuvhima, nhumbi dzekupfura nezvimwe. Tine fungira iripo yekuwandisa uye tinobvumawo tsika yekugadzira.
Yepfuura: Tungsten Bhora Lure Sinker
Kuderedza Shot Masimbi
Tungsten Jig Musoro